နှုတ်ထွက်စာ | Law & More BV
ဘ‌‌လော့ခ် » နှုတ်ထွက်ခြင်း
စက်တင်ဘာလ 9, 2020
အချို့သောအခြေအနေများတွင်အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်ရပ်စဲခြင်းသို့မဟုတ်နုတ်ထွက်ခြင်းကိုလိုလားသည်။ အကယ်၍ နှစ်ဖက်စလုံးမှနုတ်ထွက်ရန်စဉ်းစားပြီးရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုလျှင်ဤကိစ္စသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရပ်စဲခြင်းအကြောင်းနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ရပ်စဲခြင်းသဘောတူညီချက်အားဖြင့်သင်ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ Dismissal.site။ ထို့အပြင်ပါတီတစ်ခုမှသာနုတ်ထွက်ရန်လိုအပ်ပါကအလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်အားရပ်ဆိုင်းရန်မှာနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၀ န်ထမ်းသည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်အလုပ်ရှင်စာချုပ်ကိုအခြားပါတီ၏အလုပ်ရှင်၏ဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရလိမ့်မည်။ ၀ န်ထမ်းအနေဖြင့်ဤအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည် - အလုပ်သမားစာချုပ်ကိုအသိပေးခြင်းအားဖြင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်တောင်းဆိုချက်ကိုတရားရုံးသို့တင်ခြင်းအားဖြင့်ရပ်စဲခြင်း။ သို့သော်ကိစ္စရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင် ၀ န်ထမ်းသည်ထိုနုတ်ထွက်မှုရွေးချယ်ခွင့်များနှင့် ပတ်သတ်၍ မှန်ကန်သောကန့်သတ်ချက်အချို့ကိုစိတ်ထဲထားရမည်။
အသိပေးစာအားဖြင့်အလုပ်ခန့်စာချုပ်ရပ်စဲ။ အလုပ်ခန့်စာချုပ်အားတစ်ဖက်သတ်ရပ်စဲခြင်းကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရပ်စဲခြင်းဟုလည်းခေါ်သည်။ ၀ န်ထမ်းသည်ဤနုတ်ထွက်မှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါသလား။ ထို့နောက်ဥပဒေက ၀ န်ထမ်းမှစောင့်ကြည့်ရမည့်ပြnotice္ဌာန်းထားသောအသိပေးစာကာလကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ သဘောတူညီချက်သက်တမ်းမည်မျှပင်ရှိပါစေ၊ ဤအသိပေးချက်ကာလသည်အလုပ်သမားအတွက်တစ်လဖြစ်သည်။ အလုပ်ခန့်ထားသည့်စာချုပ်ပါဤအသိပေးကာလမှပါတီများအားငြင်းပယ်ခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ၀ န်ထမ်းများ A နေဖြင့်လိုက်နာရမည့် A ချက်သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ထားပါကထို A ချိန်သည်ခြောက်လ A ကန့်သတ်ထက်မကျော်လွန်စေရန်သတိပြုရန်လိုသည်။ ၀ န်ထမ်းသည်သဘောတူထားသောသက်တမ်းကိုစောင့်ကြည့်ပါသလား။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်ရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်လကုန်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားပြီးအလုပ်အကိုင်သည်ပြက္ခဒိန်လ၏နောက်ဆုံးနေ့တွင်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၀ န်ထမ်းသည်သဘောတူထားသည့်အသိပေးစာကာလကိုမလိုက်နာပါကအကြောင်းကြားစာဖြင့်ရပ်စဲခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သို့မဟုတ်တစ်နည်းဆိုရလျှင်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ထိုကိစ္စတွင် ၀ န်ထမ်းမှရပ်စဲကြောင်းအသိပေးချက်သည်အလုပ်ခန့်စာချုပ်ကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ သို့သော်အလုပ်ရှင်သည်လုပ်ခလစာများမပေးတော့ဘဲအလုပ်သမားသည်လျော်ကြေးရရန်လိုသည်။ ဤလျော်ကြေးငွေသည်များသောအားဖြင့်သတိမထားမိသည့်အချိန်ကာလအတွက်လုပ်ခနှင့်ညီမျှသောပမာဏပါဝင်သည်။
တရားရုံးမှရပ်စဲသည့်အလုပ်ခန့်စာချုပ်ရှိခြင်း။ အကြောင်းကြားစာပေးခြင်းဖြင့်အလုပ်ခန့်ထားသည့်စာချုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းအပြင်အလုပ်ရှင်စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းရန်အတွက် ၀ န်ထမ်းသည်တရားရုံးသို့အမြဲတမ်းရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ ၀ န်ထမ်းများ၏ဤရွေးချယ်မှုသည်အထူးသဖြင့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် ချက်ချင်းထုတ်ပယ် နှင့်ကန်ထရိုက်ဖယ်ထုတ်လိုက်မရနိုင်ပါ။ ၀ န်ထမ်းသည်ဤရပ်စဲခြင်းနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါသလား။ ထို့နောက်သူသည်ဖျက်သိမ်းရန်တောင်းဆိုမှုကိုစာဖြင့်ရေးသား။ ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၇: ၆၈၅ အပိုဒ် ၇ တွင်ဖော်ပြထားသည့်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များဖြင့်တင်ပြရမည်။ အရေးပေါ်အကြောင်းပြချက်များကိုယေဘုယျအားဖြင့် ၀ န်ထမ်းသည်အလုပ်ခန့်စာချုပ်အားဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန်သင့်လျော်စွာမျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိသောအခြေအနေများ (ပြောင်းလဲမှုများ) ကိုဆိုလိုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများသည်သက်ဆိုင်ပါသလား။ ၀ န်ထမ်း၏တောင်းဆိုချက်ကိုခရိုင်ခွဲတရားရုံးကလက်ခံပါသလား။ ထိုအမှု၌၊ Subdistrict တရားရုံးသည်အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ်ကိုချက်ချင်း (သို့) နောက်ကျသောနေ့၌ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်၊ သို့သော်နောက်ကြောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ အလုပ်ရှင်၏ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အမှားကြောင့်အရေးပေါ်အကြောင်းအရင်းလား။ ထို့နောက်အလုပ်သမားသည်လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်သည်။
၀ န်ထမ်းသည်သူ၏အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သဘောတူစာချုပ်ကိုနုတ်ထွက်ရန်နှင့်ရပ်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသလား။ ထို့နောက်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရပ်စဲခြင်းသို့မဟုတ်နုတ်ထွက်ခြင်းကိုအကြောင်းကြားခြင်းဖြင့်စာဖြင့်ရေးသားလေ့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစာတွင် ၀ န်ထမ်းနှင့်သူ၏လိပ်စာကိုဖော်ပြရန်ထုံးစံရှိသည်။ အလုပ်ရှင်နှင့်မလိုလားအပ်သောသဘောထားကွဲလွဲမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ၀ န်ထမ်းသည်လက်ခံရရှိသူ၏အတည်ပြုချက်အတွက်တောင်းဆိုချက်နှင့်အတူရပ်စဲခြင်းသို့မဟုတ်နှုတ်ထွက်စာကိုပိတ်ရန်နှင့်အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောစာဖြင့်ဖြစ်စေစာပို့ရန်အကြံပြုလိုသည်။
သို့သော်စာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပယ်ခြင်းသည်မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ရပ်စဲပုံစံ - အခမဲ့ဥပဒေရေးရာလုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လည်းနှုတ်ဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၀ န်ထမ်းသည်အလုပ်ရှင်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းအကြောင်းစကားပြောမှသာသူ၏အလုပ်ရှင်အားနှုတ်ဖြင့်အကြောင်းကြားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောနုတ်ထွက်ခြင်းနည်းလမ်းတွင်သတိပေးချက်ကာလစတင်သောအခါမည်သည့်မရေရာမှုကဲ့သို့သောအားနည်းချက်များရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် ၀ န်ထမ်းအား ၄ င်း၏ထုတ်ပြန်ချက်များအားနောင်တွင်ပြန်လာနိုင်ရန်လိုင်စင်မပေးသောကြောင့်နှုတ်ထွက်ခြင်းကိုအလွယ်တကူရှောင်ရှားနိုင်သည်။
အလုပ်ရှင်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တာ ၀ န်ရှိသလား။
ဝန်ထမ်းနုတ်ထွက်ပါသလား? ထိုကိစ္စတွင်အလုပ်ရှင်သည်ဤ ၀ န်ထမ်းအားအမှန်တကယ်လိုချင်သည်ကိုအလွယ်တကူမယုံကြည်နိုင်ကြောင်းပြ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေပြသခဲ့သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ၀ န်ထမ်း၏ဖော်ပြချက်များသို့မဟုတ်အပြုအမူသည်သူ၏ထုတ်ပယ်မှုကိုသူ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြတ်ပြတ်သားသားဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံအလုပ်ရှင်မှထပ်မံစုံစမ်းရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ၀ န်ထမ်းနှုတ်ဖြင့်နှုတ်ထွက်လျှင်အလုပ်ရှင်သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုဒတ်ခ်ျတရားရုံးချုပ်ကပြောသည်။ အောက်ပါအချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အလုပ်ရှင်သည်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းသည်သူ၏ ၀ န်ထမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်၊ မဟုတ်စုံစမ်းရန်
၀ န်ထမ်းသည်အလုပ်မှရပ်စဲလိုပါသလားဟူသောမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရာတွင်တင်းကြပ်သောစံနှုန်းကိုအသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ အလုပ်ရှင်မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင်ထုတ်ပယ်ခြင်းသည် ၀ န်ထမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ကြောင်းပေါ်လွင်ပါကမူအလုပ်ရှင်သည် ၀ န်ထမ်းအားကန့်ကွက်။ မရပါ။ ၀ န်ထမ်းသည်“ ပြန်ယူ” သောအခါအလုပ်ရှင်အားမထိခိုက်ပါ။ ထိုကိစ္စတွင် ၀ န်ထမ်းမှအလုပ်ခန့်ထားသည့်စာချုပ်ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်စဲခြင်းအတွက်မေးခွန်းမရှိပါ။
အားလပ်ရက်။ ၀ န်ထမ်းတွင်အားလပ်ရက်ရက်များစွာရှိသေးသည်။ ၀ န်ထမ်းက၎င်းကိုထုတ်ပစ်တော့မည်လား။ ထိုကိစ္စတွင် ၀ န်ထမ်းသည်ကျန်ရှိနေသေးသောအားလပ်ရက်များကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်သည့်နေ့တွင်သူတိုအားငွေပေးချေနိုင်သည်။ ၀ န်ထမ်းသည်အားလပ်ရက်ရက်များကိုယူရန်ရွေးချယ်ပါသလား။ ထို့နောက်အလုပ်ရှင်ကသဘောတူရမည်။ အကယ်၍ အကြောင်းပြချက်ကောင်းများရှိပါကအလုပ်ရှင်သည်အားလပ်ရက်အားငြင်းပယ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကအလုပ်သမားအားသူ၏အားလပ်ရက်ရက်များအတွက်ပေးချေလိမ့်မည်။ နေရာတွင်လာသည့်ငွေပမာဏကိုနောက်ဆုံးငွေတောင်းခံလွှာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
အကျိုးကျေးဇူးများ။ အလုပ်ခန့်ထားသည့်စာချုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သော ၀ န်ထမ်းသည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အလုပ်လက်မဲ့အာမခံအက်ဥပဒေကိုယုတ္တိနည်းကျစွာမှီခိုလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်ခန့်ထားသည့်စာချုပ်ကိုမည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖျက်သိမ်းရသည့်အကြောင်းအရင်းသည်အလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုတောင်းဆိုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၀ န်ထမ်းသည်နုတ်ထွက်လျှင်၊ ၀ န်ထမ်းသည်များသောအားဖြင့်အလုပ်လက်မဲ့ခံစားခွင့်များကိုခံစားခွင့်မရှိပါ။
သင်သည် ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနုတ်ထွက်လိုပါသလား။ ထို့နောက်ဆက်သွယ်ပါ Law & More။ တွင် Law & More အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းသည်အလုပ်အကိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများတွင်အကျဆုံးနှင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးသင်၏အခြေအနေနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုသင်နှင့်အတူတကွအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ ထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်ထပ်မံသိရှိလိုသည်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ site တွင်လည်းရှာနိုင်သည် Dismissal.site.
ယခင် Post မှ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေအက်ဥပဒေအရအလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား၏တာဝန်ဝတ္တရား